Paper Bag - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Paper Bag)
Akpa akwụkwọ eji agba aja aja aja Kraft jiri PP aka Akpa Kraft Akwụkwọ, ụdị kpochapụwo, ụdị mmadụ niile hụrụ ụdị a n'anya, mma maka ọrịre. Akpa akwụkwọ eji agba aja aja, agba dị mma na ịdị mma, nwere ike ibu ngwongwo dị arọ. Mpempe Akwụkwọ Onyinye Ekeresimesi, edere edere nke oma, ya na akara okike nke gi, dikwa...
Akpa onyinye nke agba aja aja nke Kraft nke ekeresimesi Akpa akwụkwọ Kraft bụ ụdị akwụkwọ akpa na-ewu ewu n'ihi akwụkwọ ahụ kraft bụ akwụkwọ na-adịgide adịgide ọbụlagodi obere ya. Enwere ike iji akpa mpempe akwụkwọ kraft a maka onyinye ma ọ bụ nkwakọ ngwaahịa mbupu. Banyere agba agba, agba ọcha makwara maka nhọrọ...
Akpa onyinye onyinye ahia ahia ndi edeputara Akpa ngwugwu onyinye, akpa mpempe akwụkwọ okomoko nke e biri ebi mara mma, na-eme ka ndị ahịa gị nwee mmetụta pụrụ iche. Akpa akwụkwọ ịzụ ahịa, ọ bụghị naanị na-ebu ngwaahịa gị kamakwa ọ nwere ike ịdị mma. Akpa nkwakọ ngwaahịa omenala, ya na akara ngosi edere na ihe okike,...
Black Akwụkwọ akpa nwere ọla ọcha Stamping Logo Akpa Oji ojii, akpa mpempe akwụkwọ maka onyinye dijital, akara ngosi edere di na edema, okomoko na uto. Akpa mpempe akwụkwọ na Logo, akara ngosi na-ekpo ọkụ e biri ebi, mara mma ma na-ejide anya ndị mmadụ. Akpa mpempe akwụkwọ nwere Logo ọla ọcha, akpa mpempe akwụkwọ maka...
Akpa Akwụkwọ Onyinye Ego Pụrụ Iche na Iwe ejiri Akwụkwọ
Akpa Akwụkwọ Onyinye Ego Pụrụ Iche na Iwe ejiri Akwụkwọ Akpa Akwụkwọ Onyinye Onyinye, akpa mpempe akwụkwọ maka ichikota onyinye, ihe eji ebu ngwongwo jiri nke gi. Akpa Onyinye Kraft, akwukwo kraft di elu, nke eji akara akara ede, na-ejide anya ndi
Akpa mpempe akwụkwọ siri ike ahaziri ya na mpempe Flat
Akpa mpempe akwụkwọ siri ike ahaziri ya na mpempe Flat Akpa mpempe akwụkwọ eji aka, akpa mpempe akwụkwọ maka iji onyinye na teepu aka, ọ dị mfe iburu. Akpa Akwụkwọ siri ike, ihe dị elu nwere ezigbo mbipụta akwụkwọ, na-agbasi mbọ ike. Akpaaka ahaziri ahaziri nke oma, ihe eji eme ya na onodu...
Agbamakwụkwọ Nke Akwụkwọ White na Iwe oji Akpa Akwụkwọ ọcha, akpa mpempe akwụkwọ ọcha na mbipụta akwụkwọ, na-eyi okomoko ma dị
Akpa Akwukwo Nso ekeresimesi di oke onu ahia maka onyinye Akwụkwọ akpa eke Christmas , ụdị obi ụtọ maka akpa akwụkwọ ekeresimesi, na-achịkọta onyinye ekeresimesi maka ndị enyi. Akpa, Akwụkwọ mpempe akwụkwọ, nke dị elu na ọnụahịa dị ala, ọ dị mfe iburu
Akpa mpempe akwụkwọ ọla ọla na iji PP Eriri Akpa Akwụkwọ ọla, akpa akwụkwọ maka ọla, akpa ngwongwo, okomoko na oke mma. Akpa mpempe akwụkwọ maka ọla, akpa onyinye maka ndị ahịa, gosipụta ụlọ ọrụ
Akpaaka Mpempe Akwụkwọ Ejiri aka na Ntanetị Ihu Akpa, uwe mpe mpe akwa, akpa akwụkwọ maka uwe, akara akwụkwọ eji ewu ewu. Akpa, Ederede Akwụkwọ aka, Ego akpa nwere oke di iche. Akpa Paịlị Nice, akpa mpempe akwụkwọ maka ngwugwu onyinye. Liyang Paper ngwaahịa co., Ltd bụ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ azụmaahịa dị na Dongguan,...
Akpa Mpempe Akwụkwọ Ọhụụ Mepụta Logo Akpa mpempe akwụkwọ na Logo, omenala bipụtara akara gị na imecha elu, nwere ụdị pụrụ iche. Akpa mpempe akwụkwọ dị mfe, agba ọcha na akara ngosi e biri ebi, dị mfe ma
Akpa zụrụ breeki eji aka mee Akpa mpempe akwụkwọ Black, akpa mpempe akwụkwọ ojii na akara ejiri ebi akwụkwọ. Mpempe akwụkwọ akpa, ụdị aka na ahaziri ya na aka, ọ dị mfe iburu ya. Nkwakọ ngwaahịa akpa onyinye, onyinye ngwadoro na ezigbo ihe eji eme ya, ọ bụghị ụdị. Chọrọ ngwaahịa dị mma dị oke ọnụ ahịa, gaa n'ihu...
Akpa akwụkwọ agbamakwụkwọ dị ụtọ na mbipụta oyuyo oyoyo Agbamakwụkwọ akpa akwụkwọ, akpa onyinye akwụkwọ, ụdị ụtọ na obi ụtọ. Akpa akwụkwọ e ji aka akwụkwọ dee, nwere ike ibipụta nwoke na-alụ nwanyị ọhụrụ na foto nwanyị a na-alụ ọhụrụ na akpa. Akpa obi dị mpempe akwụkwọ, ụdị obi dị n’elu, gosipụta ihunanya ha nwere....
Akwụkwọ mara mma ahaziri akpa nri foil onyinye akwụkwọ akpa Akpa ngwugwu onyinye, akpa mpempe akwụkwọ dị mma maka nkwakọ ngwaahịa ngwaahịa okomoko. Akpa foil akwụkwọ na-ekpo ọkụ, akpa akwụkwọ nwere ụdị foil okomoko na-ekpo ọkụ ma jide anya ndị mmadụ. Akwukwo mpempe akwụkwọ ahaziri aha ya, akara ngosi edere na edebere...
akpa eke kraft akwụkwọ onyinye na aka
Onwe weghaara akpa onyinye kraft biri Akpa akwụkwọ Kraft bụ ụdị akwụkwọ akpa na-ewu ewu n'ihi akwụkwọ ahụ kraft bụ akwụkwọ na-adịgide adịgide ọbụlagodi obere ya. Akpa onyinye onyinye kraft na mpempe akwụkwọ eji eji ngwugwu onyinye Banyere maka agba agba, CMYK ma ọ bụ pantone agba bụ maka nhọrọ gị. N'otu okwu,...
Akpa mpempe akwụkwọ ịzụ ahịa omenala Akpa onyinye onyinye ahia ahia di nfe, ụdị mpempe akwụkwọ edo edo na-egbochi. Nkwakọ ngwaahịa akpa onyinye, nkwakọ ngwaahịa maka akpa akwụkwọ onyinye, akwa na ejiji. Akpa ịzụ ahịa ọhaneze, akpa akwụkwọ edere edere nke nwere ezigbo ihe ederede. Chọrọ ngwaahịa dị mma dị oke ọnụ ahịa,...
Akpa uwe ndị na-ewu ewu na mpempe akwụkwọ nwere njiri rịbọn
Akpa uwe ndị na-ewu ewu na mpempe akwụkwọ nwere njiri rịbọn Akpa Ribbon, akpa mpempe akwụkwọ nwere njiri rịbọn, klas dị elu na ịma mma. Onyinye akpa di na nwunye, acha uhie uhie nke akara eji ebiputa ya, nwere ike ichikota onyinye, udiri ihe. Akpa ozi onyinye onyinye akpa, akpa akwụkwọ ozi eji enwe oke, o dighi adi....